पानी कम पिउनु हुन्छ ? यस्ता रोगले सताउला है ! - LiveMandu
जीवनमा पानीको महत्व धेरै हुन्छ । खानेकुरा नखाई मानिस तीन चार दिनसम्म बाँच्न सक्ने अनुसन्धानले देखाएको छ । तर पानी बिना भने प्राय बाँच असम्भव छ । पानी जीवन हो । यो हाम्रो शरिरको महत्वपूर्ण अंश हो । शरिरको ७० प्रतिशत भाग पानीले बनेको हुन्छ । रगत, माशंपेशी, हड्डी सबैमा पानीको आवश्यकता पर्दछ ।
पसिना र पिसाबबाट हाम्रो शरीरको पानी जाने गर्छ । विज्ञहरुका अनुसार शरीरमा पानीको मात्रा सन्तुलित रुपमा राख्न दैनिक ८ गिलास पानी पिउनुपर्छ ।
हाम्रो शरीरबाट खेर गएको पानीको मात्रा अनुसार पानी पिउनुपर्छ । शरीरको उचित कार्यका अतिरिक्त विभिन्न रोगबाट बच्न पनि पर्याप्त पानी पिउनु पर्छ । पानीको कमी हुँदा किड्नीमा समस्या, पिसाबको संक्रमण लगायतका समस्या हुन्छ । शरीरलाई स्वस्थ राख्न रसिलो फलफुल खानुपर्छ ।
पानीको अभावमा स्वास्थ्यमा निम्न समस्या देखा पर्दछन्ः
पाचन प्रणालीमा समस्याः
पानी शरीरको एउटा महत्वपूर्ण पर्दाथ हो, जसले हामीले खाएको खानेकुरालाई आन्द्रासम्म पु¥याउँछ र पाचन प्रणालीलाई सफा बनाउँछ । पानीको अभावमा पाचन पक्रिया असहज हुन्छ।
कमजोर र धमिलोः
शरीरमा पानीको अभाव भएमा तन्तु र कोषले पर्याप्त पानी पाउँदैनन्, जसका कारण इन्जाइमले पर्याप्त उर्जा उत्पन्न गर्छ । यसले हाम्रो शरिरलाई कमजोर र आखा धमिलो बनाउँछ ।
पानी अभावमा शरीरमा डिहाइड्रेसन हुन्छ । डिहाइड्रेसनले स्वास्थ्यसम्बन्धि अन्य समस्या निम्त्याउँछ ।
शरीरको तापक्रम बृद्धि गर्छः
शरीरमा पानीको मात्र कम हुद शरिरको तापक्रम घट्छ। शरिरलाई चिसो बनाउन पनि उचित मात्रामा पानी पिउनुपर्छ ।
शरीरमा पानीको अभावमा पेटको अल्सर हुन्छ। पेटमा म्युकोसको निर्माण हँदैन। यसले पाचन पक्रियामा अशर गरी पेटमा एसिडिटी बढ्छ र अल्सर निम्त्याउँछ।
शरीरमा प्रर्याप्त पानी नभएममा कब्जियतको समस्या हुन्छ।
जोर्नीमा हुने तन्तुमा झन्डै ८० प्रतिशत पानी हुन्छ। जोर्नीमा पानीको मात्रा पर्याप्त नभएमा यसले शरीर पोल्ने र जोर्नीमा पीडा हुन्छ।
रगतमा निश्चित परिणाममा पानीको मात्रा हुन्छ। तसर्थ शरीरमा पानीको अभाव हुँदा रक्त चापको मात्रा घट्छ।
मुटुको धड्कन बढ्छः
जब शरीरमा पानीको अभाव हुन्छ, शरिरमा नुन, चिनी र खनिजको मात्रा पनि कम हुन्छ । यसले मुटुको चाल असामान्य बनाउँछ।
Tags: healthhealthy lifewaterडिहाइड्रेसनःपानीपानी नाखादा हुने समस्याहरु